Loharanon’Angovo 5 Tsy Tsara Trandraka Ao Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2013 23:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, عربي, 日本語, Deutsch, Français
Niverina voaresaka be indray amin'izao fotoana izao ny olan'ny fahazoana herinaratra any aminà firenena Afrikana maro, miaraka amin'ny olan'ny fampifandimbiasana ny fanapahana azy ao Benin, Kamerona, ao Côte d'Ivoire sy Madagasikara, mba tsy hitanisàna afa-tsy ireo vao haingana indrindra.
Ao Bénin, orinasa iray Nizeriana tantanan'ny tsy miankina no tompon'andraikitra amin'ny famatsiana herinaratra ny faritra maro ao amin'ny firenena.
Ao Kamerona, soritan'ny Kongossa.fr toy izao ny toe-draharaha misy ankehitriny :
Na teo aza ireo fampiasana vola tato anatin'ny taona vitsy nataon'ilay orinasa iarahan'ny amerikana sy kamerone, AES-SONEL, natao hisahana ny famokarana, fitaterana ary ny fitsinjaràna sy ny famarotana ny herinaratra, mbola lavitry ny afo ny kitay amin'ny hivahàn'ny olana.[..] Raha toa ka maharitra eo amin'ny ora efatra hatramin'ny ora enina eo ny fahatapahan'ny herinaratra ao Douala sy Yaoundé, any amin'ireo faitra hafa ao amin'ny firenena kosa, indrindra ireo any ambanivohitra, dia samy milaza ireo taitra fijoroana vavolombelona azo fa mety haharitra hatramin'ny telo andro maninjitra izany fahatapahana izany.
Ao Côte d'Ivoire, matetika loatra ny fampifandimbiasana ny fanapahana ka nahatonga ny firaketana azy ireny ao amin'ny pejy Facebook super-héros Délestron, nosaintsainin'ireo Ivoariana mpisera anaty aterineto.
Farany, ao Madagasikara, marobe ireo vondrom-piarahamonina no tezitra amin'ilay orinasam-panjakana mpamatsy herinaratra, Jirama, ampangaina ho matetika tsy mahavita ny andraikiny. Ohatra amin'izany ireo mponin'Ambohibao Iavoloha :
Ohatra, ilay fahatapahana tsy nisy fampilazana nitranga tamin'ny 06 sy 11 Novambra farany teo. Nanomboka ny 11 hatramin'ny 15 novambra, niatrika fahatapahan-jiro ny mponina, izay tsy niverina raha tsy ny ampitson'iny efa tamin'ny 2 maraina. Izay ny olan'ny herinaratra fa ny tosiky ny rano avy amin'ny Jrama koa mbola mampimenomenona ny mponina.
Any Afrika atsimon'i Sahara, ireo mponina any ambanivohitra no tena mizaka ny mafy satria 8.4 isan-jato monja no mahana fahafahana mahazo herinaratra. Kanefa, raha ny firoboroboana kasaina hotratrarina no jerena, azo antoka fa hiakatra ambony dia ambony ny filàn'ny kaontinanta/Tanibe Afrikana. Tamin'ny 2007, 15,4 tapitrisa Btu isan'olona amin'ny maridrefin-dry zareo Britanika (British thermal units) no fanjifana isan-taona tany. Raha ampitahaina, ny fanjifàna erantany ny angovo isan'olona ary isan-taona dia 70,8 Btu ary ho an'ny teratany Amerikana dia 337,1 Btu (efa ho in-22 amin'ny Afrikana salantsalany).
Ny Tanibe Afrikana anefa tsy hoe tsy ampy otrikarena voajanahary hahafahana mamaly ny filàna amin'ny lafiny angovo. Io petrak'olana io no avandravandran'ny fihamafisan'ny hazakazaka erantany ho amin'ny fahavitan-tena ara-angovo. Ho hananana loharanon'angovo, mitodika any amin'ny loharano voajanahary ny firenena maro ao amin'ny Tanibe Afrikana.
Fandaharanasa hamokarana sy hitaterana herinaratra ao Afrika amin'ny 2040 novolavolain'ny PIDA, nahazoana alàlana taminy
Ireto ny ohatra efatra amin'ireo loharanon'angovo tsy tsara trandraky ny olona ao amin'io tanibe io:
Ny solika mavesatra ao Madagasikara
Tsy dia mbola fantatry ny olona manerantany loatra ny resaka solika ao Madagasikara, saingy anton'ny fitsiriritana marobe izy io [en]. Na eo aza ny krizy politika, tsy nitsahatra velively ny fahalinana amin'ny solik'i Madagasikara, ho an'i Japana ohatra, araka ny anazavan'i Antsa azy :
Nisy iraka manokan'ny Japone tonga nihaona tamin'ireo tompon'andraikitry ny Ministeran'ny Angovo, nikaro-baovao momba ny toerana misy ny sehatry ny loharanon-tsolika amin'izao fotoana izao, hatramin'ireo lalàna sy fepetra mifehy. «Na eo aza ny krizy politika, mijanona ihany ireo mpampiasa vola ary mbola tonga aza ny sasany mba hitrandraka ny solika. Na dia mbola anatin'ny fotoana fitsirihana aza ry zareo, dia efa misy sahady ny tombontsoa azo amin'izany, ohatra ny fananganana sekoly, toeram-pitsaboana, ny fanavaozana sy fanamafisana ny fahaiza-manao, sns. Ambonin'izany, tsy mamoaka vola ny governemanta, na dia zaraina aza ny vokatra azo», hoy ny fampahafantaran'ny Tale Jeneralin'ny Ministeran'ny Angovo. Aoka homarihantska fa telo ireo orinasa Japone mpitrandraka solika no liana amin'i Madagasikara amin'izao fotoana izao, dia ny ICEP, Jog Meg sy Mitsibushi.
Tsy hoe mandeha ho azy tsy misy atahorana akory io fahalinana misonga asehon'ireo mpitrandraka solika ireo. Manazava i Holly Rakotondralambo, Malagasy mpiara-miombon'antoka amin'ny “Amis de la Terre/Sakaizan'ny Tany” :
Raha miakatra avo dia avo noho ny filàna tsy mitsaha-mitombo maneran-tany ny vidin'ny solika sy ny vy, ireo orinasa goavana sy ireo mpampiasa vola indray mihazakazaka mankany Madagasikara. Anatinà vanim-potoana ara-politika tena marefo, mety hampihenjana ny fifanolànan'ny mponina izany, sy hanaratsy misimisy koka ny haren'ny firindràn'ilay tontolo manan-karena efa ambivitra.
Ireo loharanon-karena voajanaharin'i Madagasikara sy ireo orinasa mpifaninana amin'ny hitrandrahana azy ireny. Sarintany navoakan'ny masoivoho OMNIS tao amin'ny Facebook, nahazoana alàlana
Ny fasika mitahiry solika ao amin'ny Repoblikan'i Congo
Sarotra iasàna ny fasika mitahiry solika ary miteraka resabe noho ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana. Loharano goavana aminà solika mavesatra antsoina hoe “pétrole brut de synthèse” ireo toeram-pitrandrahana fasika mitahiry solika. Ny orinasa Italiana ENI no voalohany amin'ny fitrandrahana ny fasika mitahiry solik'i Afrika. Ao Congo, mitrandraka ny fasika mitahiry solika any amin'ny 70km ao Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, anatin'ny faritr'i Tchikatanga sy Tchikatanga-Makola ny ENI. Tsy hoe mandeha fotsny tsy ahitan-doza koa ny fitrandrahana fasika mitahiry solika, araka ny anazavan'i “Vivement la désintox” azy:
Ny fitrandrahana ny fasika mitahiry solika no fomba maloto ratsy indrindra, lafo indrindra sy mpiletra angovo betsaka indrindra mba hamokarana solika. Mba hahazoana solika 1 barika dia mila rano 5 barika ary avo dimy heny amin'izay ny entona miteraka fihafanàna aterany, raha mitaha amin'ny fitrandrahana solika mahazatra. Midika famotehana ala ihany koa sy fandotoana rano fisotro ny fitrandrahana fasika mitahiry solika. Amin'izay indrindra, mba hanasarahana ny solika amin'ny fasika dia mampiasa vokatra simika ireo orinasa, izay mandoto amin'ny ampahany betsaka ny tany sy ny renirano.
Ireo vondrom-pihary ahodin-drivotra any Cap Vert
Ireo nosy ao Cap Vert no toerana midadasika indrindra mandray ny tetikasa goavana hitrandrahana angovo azo amin'ny rivotra ao Afrika. Ireo fitaovana famokarana any amin'ireo nosy efatra dia mety ho afaka hamokarana ny fatranà herinaratra be indrindra azo avy amin'ny rivotra (mifanahantsahana amin'ny haben'ilay firenena) eto amin'izao tontolo izao, araka ny hazavain'ity lahatsary manaraka ity :
Manazava ny maha-zava-dehibe ny angovo avy amin'ny rivotra [teny anglisy] ho an'io firenena io i Juan Cole :
Sàkana lehibe ho an'ny fampiroboroboana ara-toekarena sy ny famoronana asa ny tsy fahampian'ny herinaratra sy ny vidiny midangana. Isan'ny antony fototry ny fifindra-monin'ny mponina ihany koa io. Raha raisina hoe miankina aminà famatsiam-bola goavana ny angovo azo avy amin'ny rivotra ho an'ny Eoropeana, ny tetikasan'i Cap-Vert kosa dia mifototra fotsiny amin'ny otrik'angovo matanjaka azo avy amin'ny rivotra. Ny herinaratra vokatra avy amin'ny rivotra dia moramora kokoa noho ireo loharanon'angovo efa nampiasaina hatramin'izao manerana ireo nosy rehetra.
Ny otrik'angovo avy amin'ny masoandro ao Bénin
Miaraka amin'ny fanjifàna miha-mitombo ao Bénin, (vinavinain'ilay orinasa mpamatsy herinaratra ho 11 % eo ny ho fivoarana ato anatin'ny taona vitsy), ny tsy fahampian'ny fampiasàna vola amin'io sehatra io, manampy trotraka azy ny fahaverezana eny am-pitaterana sy fitsinjaràna azy (eo amin'ny 18-30 %) no tena antom-pisian'ny fampifandimbiasana ny fanapahan-jiro amin'izao fotoana izao. Léomick Sinsin, bilaogera ao Bénin, no manoritsoritra ireo tombontsoa azo avy amin'ny angovo entin'ny masoandro ho an'ny fireneny :
Taratra eo anelanelan'ny 3 sy 6 kWh isaky ny m² arakarakay ny toerana ara-jeografika misy, ny tombon-dahiny ho an'ny fotodrafitrasa ampiasàna ny masoandro dia ny fahafahany manome tanjaka sahaza hamaliana ireo filàna isan'andro. Ankilan”izay, ny tombony amin'ny fotodrafitrasa mampiasa masoandro dia ny fanapariahana ny fotdrafitrasa famokarana. Rehefa tonga saina amin'ny fahanteran'ireo fotdrafitrasa efa misy hatramin'izay, tsy hisy angamba handà ny mampitombina ny fampifanakaikezana ny toeram-pamokarana ny ny toerana misy ny fanjifàna. Ny ohatra tsara amin'io dia trano iray mitoka-monina miaraka amin'na fitavana isan-karazanay eo ambony tafontrano. [..] Ny tohan-kevitra farany nefa tsy maivan-danja velively dia ny asa mahomby ara-angovo apetraky ny fotodrafitrasa mampiasa masoandro. Angovo tsy mitohy ny fampiasàna masoandro fa miankina amin-javatra maro toy ny toetr'andro, ny hatsaran'ilay fitaovana napetraka, sns. Araka izany, ny mitaky fampiasàna fiaovana tsotsotra sy tsy mitrka angovo be loatra ny fanjifàna azy. Ahenantsika araka izany ny fatran'ny fanjifàna no sady tazoninsika hatrany ny haavon'ny filàntsika azy.
Ny angovo antsoina hoe “énergie géothermique” any amin'ny lemak'i Rift
Marobe ireo masoivoho no manisy tsindrim-peo tato ho ato mikasika ny lanjan'ny “énergie géothermique”, na angovo azo amin'ny fampiasàna ny hafanan'ny tany, ho fitaovana iray enti-mamaly ny filàna ara-angovon'ireo firenena ao amin'ny Tandrok'i Afrika sy ny ao amin'ny Lemak'i Rift, fa koa ho ampahany tsy misaraka amin'ny fandaharanasa “fandrosoana maitso”. SciDev.Net mitatitra hoe ho lasa mpisehatra manana ny toerany i Djibouti ao anatin'ny resaka fampiasana ny angovo azo amin'ny hafanan'ny tany :
Andalam-pandalinana azy izao ny otrik'angovo azo amin'ny hafanan'ny tany ananan'ny fairtra Lac Assal ao amin'ity firenena ity, izay hita ao amin'ny Lemak'i Rift [..] Mety hanomboka amin'ny taona 2018 ny famokarana angovo ao amin'ny Lac Assal , izay hisanda 240 tapitrisa dolara Amerikana, hiteraka 40 hatramin'ny 60 mégawatts. Manoso-kevitra ny BAD ny amin'ny tokony hisian'ny fiaraha-miasan'ireo mpiara-miombon'antoka avy amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina hampandroso ireo tetikasa ireo noho ny sandany lafo be.
G. Pourtier manampy fa miroso ihany koa i Ethiopie amin'ny fitrandrahana ny angovo ampiasàna hafanana:
Any amin'ny 200 km atsimon'i Addis-Abeba, renivohitra etiopiana, hamokatra 20MW eo aloha ilay toby vaovao famokarana manomboka ny 2015, avy eo 500 MW amin'ny 2018 ary farany 1 GW taona vitsy aorian'izay [..]. Maharakotra 6500 km2 ny velarana azon'ny Reykjavik Geothermal ao Éthiopie, ka 200 km2 no efa voafaritra ary ahitàna hafanàna tafakatra hatramin'ny 350°C.